Allgedo.com » 2011 » October » 20
Home » Archive Daily October 20th, 2011 Hay’adda Samafalka SADO oo Gargaar raashineed iyo Abuurka Beeraha ka qeybisey degmada Baardheere( Sawiro) Oct 20, 2011 Baardheere, Somalia (AOL) – Hay’adda Samafalka ee SADO ayaa soo gababaysay Qeybtii labaad ee raashin gargaar ah loogu qeybinayey dad ka badan ilaa 1800 oo qoys oo u badan barakacayaal ay waxyeelo adag ka soo gaartey dhibaatooyinka Abaaraha ee ka taagan Gobolada Koonfurta Dalka Soomaaliya.
Raashinkani Gargaarka ah ee la siiyey Qoysaskani faraha badan ee Barakacayaasha ah ,islamarkaana... War-Saxaafadeed kasoo baxay shirkii maanta ee Golaha Wasiirada dowladda KMG ah ee Soomaaliya iyo qodobo muhiim ah oo kasoo baxay. Oct 20, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) - Shir ay maanta yeesheen Golaha Wasiirada oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin siyaasadda guud ee la dagaalanka musuqmaasuqa, xaaladda nabadgelyo ee dalka iyo barnaamijka nabad iyo cunno “food for Peace”, waxaa sidoo kale warbixin looga dhageystay Gudoomiyaha... Muammar Gaddafi Killed, Captured In Sirte: Reports Oct 20, 2011 Longtime dictator of Libya, Muammar Gaddafi, has been killed following the capture of his hometown of Sirte.
Arab broadcasters showed graphic images of the balding, goateed Gadhafi – wounded, with a bloodied face and shirt – but alive. Later video... Xarakada Mujaadiinta Alshabaab oo ceelasha biyaha kusoo bandhigay Meydadka in ka badan 70-meeyo Askarta AMISOM ah (Sawiro) Oct 20, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Xarakada Mujaahdiinta Alshabab ayaa guulo ka sheegtay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Dayniile ee magaalada Muqdisho islamarkaana beeniyey in ciidamada dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka qabsadeen deegaankaasi. Afhayeenka xarakada Alshabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage (Sh. Cali dheere) oo saxaafada kula hadlayey deegaanka calamada ee ceelasha biyaha... Dagaalada Muqdisho oo xoogeystay, Dowladda KMG oo guulo sheegatay iyo Alshabaab oo meydad ku soo bandhigtay Duleedka Magaalada. Oct 20, 2011 Wararka naga soo gaaraya caasimada magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay xoogeysteen dagaalada ka socda Xaafadaha degmada Deyniile, halkaasoo saakay ay weerar culus ku qaadeen Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda KMG Soomaaliya.
Abaan duulaha Ciidamada Xooga Gan: C/kariin Yuusuf Aadan Dhaga badan oo la hadlay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen dagaaladaasi, isagoo tibaaxay... Dowladda Yugandha oo soo dhawaysay soo gelitaanka Ciidamad Kenya ee Soomaaliya. Oct 20, 2011 Dowladda Yugandha ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee gudaha dalka Soomaaliya, waxayna sheegtay inay taageersantahay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee gudaha dalka Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Yugandha ayaa saxaafadda u sheegay in Kenya ay xaq u leedahay sida uu yiri inay daafacdo dalkeeda, isla markaasna ay ka hortagto cid kasta oo xasilooni-daro... Ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda KMG ee ku sugan Ceelwaaq oo xiray mid ka mid ah mas’uuliyiinta degmadaasi Oct 20, 2011 Ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda KMG ah ee ku sugan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa xabsiga dhigay guddoomiye ku xigeenkii degmadaas, Sahal Macallin Cali.
Lama oga sababta keentay in la xiro mas’uulkan, iyadoo sidoo kalena aysan ka hadlin mas’uuliyiinta ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa Kenya ee ku sugan degmada Ceelwaaq.
“Ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa Kenya ee ku sugan... WAR DEG DEG AH: Dagaal culus oo ka soconaya degmada Deyniile ee Magaalada Muqdisho. Oct 20, 2011 Wararka naga soo gaaraya caasimada magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xiligan dagaal culus uu ka soconaya xaafadaha degmada Deyniile ee Magaalada Muqdisho, kadib markii aroortii hore saakay weeraro culus ay qaadeen Ciidamada Burundi iyo kuwa dowladda KMG soomaaliya.
Waxaa la sheegayaa in haatan xabaduhu ay ka dhacayaan gudaha degmada deyniile, kadib markii ay galeen ciidamada Burundi iyo kuwa dowladda... Oktoobareey Adaa Lahaa! By Duraan A. Shirwac Oct 20, 2011 21-kii oktoobar 1969 waxay ahayd dharaartii ciidankii qalabka sidey ee xooga dalka soomaaliyeed ee uu hogaaminayey (AUN) jaalle maxamed siyaad barre uu i toosa ula wareegay xukunkii dalka soomaaliya kaasoo ahaa midaan dhiig ku daadan.
Is badalkaas ka dhacay dalka soomaaliya waxuu noqdey mid ay durba u riyaaqaan shacabkii soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba kaasoo lagu soo dhaweeyey caleemo qoyan... Oktoobarey adigaa lahaa Guul iyo Gobanimo! By Zeylici Aden Urur Oct 20, 2011 Shaki kuma jiro in Kacaankii libineed ee 21kii Oktoober 1969kii uu u horseeday ummadda Soomaaliyeed qarannimo iyo sharaf, 42ka sano oo hadda ay ka soo wareegtay curashadii Kacaanka waxaa xisaab ahaan ay u qeybsan tahay laba qeybood oo is la’eg, waxaa 21ka sano oo hore laguna qiimeyn karaa nabad, horumar iyo qarannimo, halka 21ka sano oo dambena lagu qiimeyn karo qaran bur-bur, qaxootinimo iyo... BoggaXiga »